Ovy nopotsehina, sakafo fihinana tsy mampatavy anao | Nutri Diet
Fausto Ramirez | | Vatsim-pivelomana
Manolotra anao izahay a fomba fahandro mihinana afa-po, nefa tsy mampatavy izany: ovy nopotsehina miaraka amin'ny trondro. Ho an'ny olona iray dia mila fonosana puree ovy tsy misy rano ianao, rano mafana 110 ml (izay tsy tonga amin'ny vay), 40 g an'ny trondro fotsy, atody atody ary rosemary.
La fiomanana Tsotra sy mora entina izy io: ny trondro, ary amboary ny ovy nopotsehina tamin'ny rano mafana. Avy eo, araraka amin'ny tsorakazo, afangaro ny trondro masaka, afangaro amin'ny ovy nopotsehina ary ampiana ny atody atody.
Ary farany, dia ampy ny mampifangaro tsara ny tany rehetra, manitsy ny sira ary amin'ny zavatra hafa kely. ny Platon sakafo vonona izy, ary azo aroso amin'ny salady salady, sy voatabia serizy.
Manana tombony maro ity puree ity: tsara izany mahavoky, manome fahafaham-po ny fahazotoan-komana ary manome ireo otrikaina ilaina fahasalamana, fanalavirana izay mety hampidi-bola. Etsy ankilany, ny fiomanana dia mitaky tsy mihoatra ny 40 minitra, ary ny voafehy tsotra sy mora hita izy ireo. Ary farany, matsiro be ilay lovia, ary mety indrindra raha mihinana trondro ny ankizy.
Ny rano hanomanana ny puree dia azo soloina lfanariana omby na soja. Ny mety hafa dia ny mampifangaro ny rano amin'ny ronono vitsivitsy: hahazo loko tsara kokoa isika. Manolotra zavatra tsara ny trondro fahan'ny mavitrika, satria manome andiam-proteinina fanampiny hafa. Ity resipeo ity dia manome proteinina 26 g, lipida 8 g, ary gliosida 10 g, ka tsy izany matavy, na firy no hohaninao.
Fanazavana fanampiny - Sakafo malefaka
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Nutri Diet » Vatsim-pivelomana » Ovy nopotsehina, sakafo fihinanana sakafo izay tsy mampatavy anao
Tombontsoa azo avy amin'ny fihinana prune
Sakafo, proteinina, gliosida ary lipida